Microsoft Surface Duo inopfuura FCC pamberi pekutanga
Microsoft inotevera Surface Duo yakaziviswa gore rakapfuura uye akakosha maficha akaburitswa muna Chivabvu. Nhasi, iyo mbiri-skrini Surface Duo ine Bluetooth neWi-Fi yakapfuura neFC inhanho yekupedzisira yekutanga.
Pakutanga nhasi, FCC rakabudiswa zvinyorwa zveMicrosoft "phablet mudziyo" pasi pemuenzaniso nhamba 1930. Zvinoenderana nerondedzero yacho, iyo mbiri-screen kifaa inotsigira LTE (4G), Bluetooth, uye 802.11ac WiFi.
Gwaro reFC hariratidze Surface Duo sekubvumidzwa kweNFC nekuti SAR kuongororwa haina kudikanwa. Zvakare, mune rimwe gwaro, chikamu chinonzi "waya chisina waya" chinotaura nezveNFC uye Bluetooth.
Kunze kweiyo FCC madheti, hapana chimwezve chekuunganidza kubva kune aya maficha panguva ino, asi zvinotsigira kuti Surface Duo inogona kunge iri kuenda kuzvitoro zviri padyo newe munguva pfupi.
Zvakakosha kucherechedza kuti Surface Duo Hardware yakagadziriswa muna 2019 uye rakawanda basa reDuo software rakaitwa kare.
Iyo inomhanyisa Android 10 kunze kwebhokisi, asi Microsoft ichaburitsa Android 11 pfupi mushure mekuvhurwa kwaSurface Duo gare gare chirimo chino. Pamusoro peApple 11, pane chinovhurika chetsika kubva kuMicrosoft uye chinotsigirawo maitiro.
Surface Duo inotumidzira neQualcomm's Snapdragon 855 processor uye pachave neinenge 6GB ye RAM uye 64GB yekuchengetedza kuve nechokwadi kuti Surface Duo inomira inorema multitasking basa.
Microsoft inoronga kutengesa Surface Duo mune matatu anotevera magadzirirwo:
6GB RAM uye 64GB kuchengetedza.
6GB RAM uye 128GB kuchengetedza.
6GB RAM uye 256GB kuchengetedza.
Uyezve, iyo Surface Duo inoshaya microSD kadhi kadhi.
Iyo kifaa inouya ne 11-megapixel pamberi-yakatarisana kamera uye kune imwe USB-C doko pazasi yekuchaja iyo 3460mAh bhatiri. Microsoft yakasanganisawo chigunwe chekutarisa pane imwe nzvimbo pane Surface Duo.
Surface Duo ichasvetuka isina waya yaachaja uye mutengo unoramba usina kusimbiswa.
The post Microsoft Surface Duo inopfuura FCC pamberi pekutanga yakatanga kutanga Windows tsva
Surface Duo Ongororo: Kutsvaga kwekugadzira
Asus ROG Zephyrus Duo 15 Ongororo: Iyo ramangwana rakashanduka
MAKARA iGame GeForce RTX 3050 Ultra W DUO OC 8G-V Ongororo